Ahoana ny fanamboarana baomba sy voanjo amin'ny indostrialy - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy >> Fomba fanaovana voanjo sy bolt
Betsaka aminareo no haka sary an-tsaina ny fomba fanaovana ny bolts sy ny voanjo, saingy mendrika ny ho hita mivantana izany. Izy ireo no fasteners mahazatra, ampiasaina hatraiza hatraiza. Efa mba nanontany tena ve ianao hoe ahoana ny fomba nanaovana azy ireny?
Fantatrao ve fa ny tsorakazo tariby dia asitrika ao anaty phosfat mba hisorohana ny harafesina? Ary ny fizotry ny famokarana visy dia ny sandoka sandoka ary ilay misy voanjo mafana sandoka?
Jereo ny horonantsary dia ho hitanao ireo fahagagana mamela manamboatra visy miisa 300 isa-minitra ...
Volavola fanodinana visy:
Izy ireo dia vita amin'ilay antsoina hoe vy tariby vy izay mandany hatramin'ny 30 ora ao anaty lafaoro mba hanalefaka azy sy hahafahany miasa azy
Ny tsorakazo tariby dia atsofoka ao anaty fandroana asidra solifara mba hanesorana ireo potika oksida.
Sasaina amin'ny rano izy avy eo ary ampandroina amin'ny phosphate, izay manakana ny vy tsy ho harafesina alohan'ny hamokarana ilay visy ary hosorana hamolavola azy tsara kokoa.
Ny visy dia vita amin'ny fanaovana hosoka mangatsiaka
Ahitsy sy hokapaina ny tehina tariby
avy eo mamakivaky andiana bobongolo izay manome azy ny endrika boribory lavorary ary avy eo mamoritra ny loha amin'ny dingana samihafa
raha vantany vao vita ity mba hamoronana ny ampahany mifanohitra aminy amin'ny milina fitsikilovana, izay masinina mamolavola ny sisin'ny visy tsirairay, mamorona ny chamfers
Ny forging mangatsiaka dia mamorona takelaka ilaina mba hiran'ny visy amin'ny voanjo, amin'ny alàlan'ny tsindry fanerena
Mandritra ny teboka rehetra, ny santionany dia alaina amin'ny alàlan'ny fifehezana kalitao (refesina amin'ny micrometre, calipers ary gauge perine ho an'ny kofehy)
Dingana famokarana voa
Izy io dia vita amin'ny alàlan'ny fizotra mafana
ny vy vy dia mizara ho ampahany kely antsoina hoe paositra ary mafana amin'ny 1200ºC mba hahatonga azy ireo ho malleable
miaraka amin'ny marotoa pneumatika dia omena endrika hexagonal izy ary miaraka amin'ny maty ny lavaka anatiny
aorian'izay ny kofehy dia sokina raozy, bara hiditra ao anaty lavaka. Rehefa mangatsiaka miaraka amin'ny menaka fanosorana mba hampihena kely ny akanjo amin'ny kofehy
ny voanjo sy kofehy Atsofoka ao anaty lafaoro amin'ny 800ºC mandritra ny adiny iray izy ireo ary avy eo mangatsiaka amin'ny diloilo mandritra ny 5 minitra, hanomezana tanjaka azy ireo ary hanamboatra ny firafitry ny vy. satria nihamafy ny vy nefa nanjary malemy dia naverina nafana tamin'ny 800ºC nandritra ny adiny iray hafa izy ireo mba hanesorana ny fahamendrehana, satria voatazona ny hamafiny.
Ary farany, ny sombin-javatra dia mandeha amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso kalitao hahitanao ny tanjaka mampatanjaka, ary ny habetsaky ny hery ilaina hamakiana ilay visy
Lohahevitra tena mahaliana raha liana amin'ny famoahana hevitra ianao ary afaka miresaka momba ny vy sy ny fitsaboana hafanana samihafa ary ny fiantraikan'izy ireo amin'ny rafitra anatiny
Ahoana ny fanamboarana sambon-taratasy
2 hevitra momba ny "Ahoana no anaovana ny voanjo sy ny baomba"
Novambra 11, 2019 amin'ny 12:54 maraina
Inona avy ireo fitsaboana hafanana ananan'ny visy?
Inona avy ireo teknika ho azy ireo?